Thread: [mm]tGefvdkif;ay:uowif;rsm; (5)[/mm]
07-01-2012 08:24 AM #771
လ ဝ က ကကောင်တွေထောပြီ
akm, azaw, fergusan, galladino, honelay86, htinlinn, khit, ko too, ktg, little caesar, mahawgani, MNO.BN, Oscar Htun, smssms888, THIHA, yankanar, yokesoe, zepeian, zero6
07-01-2012 09:36 AM #772
Thanked 43,792 Times in 6,634 Posts
ယခင် တပ်မတော် အစိုးရ အကြီးအကဲ ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး (ငြိမ်း) ဦးသန်းရွှေ ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ကွယ်လွန်သွားသည် ဟူသော သတင်းမှာ မှန်ကန်မှု မရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးက The Voice Weekly သို့ ယနေ့မွန်းလွဲ သုံးနာရီခန့်တွင် အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
azaw, coolsnow, fergusan, galladino, honelay86, htinlinn, k-pooh, khit, ko too, ktg, little caesar, mahawgani, MNO.BN, smssms888, THIHA, yankanar, yokesoe, zepeian, zero6
07-01-2012 01:00 PM #773
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါ အဝင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှအနိုင်ရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် မေလ ၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော လွှတ်တော်တွင် ကျမ်းကျိန်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းအပါအဝင် ရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌများပါသောအဖွဲ့နှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ရန်ကုန်မြို့တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းအပါအဝင် ရေးရာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌများပါဝင်သော အဖွဲ့နှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား များသည် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီအချိန်က ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်တာဝါရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များလေ့လာ ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင် ရန်ကုန်(ရုံးခွဲ) ၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင် လက်ရှိအသွင်းကူးပြောင်းရေးကာလနှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာကိစ္စများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများက ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေကိစ္စရပ်များ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ပြန်လွှတ်ပေးရေး ကိစ္စများနှင့် ပြည်ပရောက် နိုင်ငံရေးအင်အားစုများ ပြန်လာနိုင်ရေး ကိစ္စရပ်များကို အဓိကထား ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
''ဒါပထမဆုံးစတွေ့တဲ့ပွဲ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာတွေမှာ လွှတ်တော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ အရေးကြီးတဲ့အကြောင်း၊ လွှတ်တော်ကနေ ဥပဒေတွေ ပြဋ္ဌာန်းတာ၊ ပြင်ဆင်တာ၊ ဖြည့်စွက်တာ၊ ပြန်သုံးသပ်တာ အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ အဲဒါတွေ တစ်ကယ်အသက်ဝင်လာဖို့၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဖက်က၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေ ဖက်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ အဓိက ပြောချင်တာကတော့ သဟဇာတဖြစ်ဖို့ပေါ့။ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေအကြား အထွေထွေ သဟဇာတဖြစ်ဖို့ အဲဒါတွေ ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုရှိရင် ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ ဆက်သွယ်နိုင်မယ့် လမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုထားသွားဖို့လည်း ဥက္ကဋ္ဌကြီးက အလေးအနက်ပြောသွားပါတယ်'' ဟု ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သူ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးကိုကိုကြီးက ပြောပါသည်။
ယင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ စီးပွားကူးသန်းရေးနှင့် ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်သိမ်း၊ အားကစား၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးအေးမြင့်၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် စက်မှုလက်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဌေးမြင့်၊ တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာဆိုင်ရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးအောင်ကို၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စိစစ်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်သိန်းလင်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခိုင်မောင်ရည်တို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့မှ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ဦးကိုကိုကြီး၊ ကိုပြုံးချို၊ ကိုမြအေး၊ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုအံ့ဘွယ်ကျော်တို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လဝက ဝန်ကြီးဌာနများမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့် မီဒီယာများတွေ့ဆုံ
ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်ရှိ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးစိုးသိန်း၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ တို့သည် မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးစိုးသိန်းက ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဥပဒေ၊ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အလားအလာ စသည်တို့ကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရယူရန်ဆောင်ရွက်နေသည့် ကိစ္စရပ်များ၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် အဆင့်မြင့် ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးသည့် ကိစ္စရပ်များ၊ စီမံကိန်းများ၊ ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ ခွင့်ပြုပေးနေသည့် အစီအစဉ်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးနေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်းကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
Last edited by zepeian; 07-01-2012 at 01:25 PM. Reason: adding more news.
academy, adaptor, ahteekyan, azaw, batoe, blackcat13, Ceiko, coolsnow, fergusan, honelay86, htinlinn, Jim, k-pooh, khit, Ko Khant, ko too, ktg, little caesar, mahawgani, MNO.BN, murphy, nnnaing, peace777, smssms888, tiptop, yankanar, yokesoe
07-02-2012 12:52 AM #774
မူဆလင်နိုင်ငံကူဝိတ် မှ မြန်မာနိုင်ငံအား မူဆလင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ရ်ျ ရှုတ်ချ။
KUNA : Kuwait condemns inhuman practices against Muslims in Myanmar...
AUNGTHUYA, azaw, chitpa, fergusan, honelay86, k-pooh, khit, ko too, koluchaw, ktg, little caesar, mahawgani, MNO.BN, thuthuaung, yankanar, yokesoe, zepeian
07-03-2012 01:31 PM #775
Thanked 1,717 Times in 114 Posts
I think everybody in Mynamar should aware of this.
Myanmar will accept 28000 + 400,000 Bingalis, said Deputy Minister of MOFA.
Here is the link from thithoolwin.
Last edited by ko too; 07-03-2012 at 01:55 PM.
chitpa, fergusan, Hollinaz, honelay86, khit, mahawgani, staraye, yankanar
07-03-2012 02:39 PM #776
Unicef ၏ သံတမန်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဂျက်ကီချမ်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့မှ တစ်ဆင့် မန္တလေးမြို့သို့ လာရောက်မည်ဖြစ်ပြီး ဇူလိုင် ၅ ရက်ညနေ ၃ နာရီ တွင် ၄င်း၏ အထူးလေယာဉ်ဖြင့်---
akm, fergusan, galladino, Hollinaz, honelay86, jackie, k-pooh, ko too, ktg, mahawgani, smssms888, yankanar, zepeian
07-03-2012 02:42 PM #777
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းနဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံ (ရုပ်သံ)
akm, coolsnow, fergusan, galladino, Hollinaz, honelay86, k-pooh, khit, ko too, little caesar, mahawgani, smssms888, yankanar, zepeian
07-05-2012 02:41 PM #778
အစ္စလမ် အဖွဲ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တိုက်တွန်း
ရိုဟင်ဂျာ မိသားစုတွေ အကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ ကိစ္စ ငြိမ်းအေး ဖို့ အတွက် ကူညီပါရန် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို OIC ခေါ် အစ္စလမ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ အစည်းက တိုက်တွန်း
OIC အဖွဲ့ အကြီးအကဲ မစ္စတာ အစ်ကမက်လဒင်း အီစားနို ( Ekmeleddin Ihsanoglu) က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို စာနဲ့ရေးသားမေတ္တာရပ်ခံရာမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင်တဦးအနေ နဲ့ ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆောင်ရွက်ရာ
မှာ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာမိမိ အိမ်ရှေ့ ကနေ စတင်လိမ့် မယ်လို့ မိမိ တို့ ယုံကြည် ပါကြောင်း ဖေါ်ပြပါရှိပါတယ်။
အဖွဲ့ ဝင် ၅၇ နိုင်ငံပါရှိတဲ့ OIC အဖွဲ့ရဲ့ ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ အစ်ကမက်လဒင်း အီစားနို က ဒုက္ခသည်တွေ မိမိတို့ နေရာကို မြန်မြန် ဆန်ဆန် ပြန်နိုင်ရေးအတွက်လည်း တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပြီး ရိုဟင်ဂျာများရဲ့အခွင့်အရေးတွေ ဖေါက်ဖျက်ခံရမှု အပေါ် လည်း စိုးရိမ် ပူပန်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါ တယ်။
ဒါ့အပြင် ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ OIC ဌာနာချုပ်ကိုလည်း လာရောက်လည်ပတ်ဖို့စာထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဖိတ်ခေါ် ထားပါတယ်။
akm, barronbala, chitpa, fergusan, Grace, gypsydoll, honelay86, khit, ko too, little caesar, mahawgani, smssms888, yankanar
07-05-2012 09:37 PM #779
စစ်တွေမြို့ မြို့မဈေးတွင် ယခင်က ဘင်္ဂလီအလုပ်သမားများလုပ်ကိုင်နေသော လုပ်ငန်းခွင်များတွင်ရခိုင်တိုင်းရင်းသား အလုပ်သမားများအား အစားထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။''ဒီနေ့ မြို့မဈေးကိုဖွင့်ထားပါပြီ၊ ဈေးတွင်းအလုပ်သမားတွေကိုလည်း ရခိုင်တွေကိုပဲ ခန့်ထားပါပြီ၊ ဒါကလဲ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်အလုပ်သမားတွေ အတွက်ပါ၊ လူကြီးတွေရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ လုပ်တာပါ၊''ဟု ဒေသခံ ရခိုင်အမျိုးသားတစ်ဦးက ပြောသည်။ယခင်က ဒေသခံ ရခိုင်လုပ်သားအများစုမှာ ကြုံရာအလုပ်များအား ဝင်ရောက်လုပ်နေကြရပြီး လက်ရှိတွင် မြို့မဈေးအတွင်း၌ ရခိုင်အလုပ်သမားများကိုသာ အသုံးပြုရတော့မည်ဖြစ်သည်။" ကျွန်တော်တို့်က အလုပ်မရှိတာ ကြာပြီ ကြုံရာလုပ်နေရတာ အခုလို ဈေးမှာ ပုံမှန် လုပ်နေရမယ်ဆိုတော့ မိသားစုအတွက် ဝင်ငွေကောင်းသွားပါပြီ''ဟု မြို့မဈေးတွင် ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသည့် ရခိုင်အလုပ်သားတစ်ဦးက ပြောသည်။
ထိုအပြင်လူမှုရေးအဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ၀ံလက်ဖောင်ဒေးရှင်းမှလည်း ရခိုင်အလုပ်သမားများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အတတ်ပညာအနေဖြင့် မုန့်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာသင်တန်းများကို အခမဲ့ပို့ချပေးနေကြောင်းကိုလည်း သိရှိရသည်။'' လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာလဲ ရခိုင်တွေကိုပဲ အသုံးပြုဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါတယ်၊''ဟု စစ်တွေမှ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။စစ်တွေမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သံဃာ့သာရေးနာရေးအသင်းမှ ဆရာတော်ကြီးများကလည်း လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ဘင်္ဂလီများအစား ရခိုင်လူမျိုးများကိုသာ အလုပ်ပေးရန် တောင်းဆိုထားသလို ရခိုင်အလုပ်သမား သမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရန်လည်း တောင်းဆိုထားကြောင်း သိရသည်။" ရခိုင်အလုပ်သမား သမဂ္ဂကိုဖွဲ့စည်းသင့်တာ ကြာပြီ၊ ဒီလို ဖွဲ့စည်းထားမှ အလုပ်ရှင်တွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ ရခိုင်အလုပ်သမားတွေကို ရှာဖွေပေးနိုင်မှာ''ဟု ရခိုင်သမိုင်းသုတေသီဆရာတော်ဦးပညာစာရက မိန့်ကြားသည်။
AungNN, barronbala, fergusan, fieldmarshal, honelay86, khit, ko too, mahawgani, mgmgthan, smssms888, stroms, yankanar
07-05-2012 09:40 PM #780
AungNN, barronbala, fergusan, fieldmarshal, honelay86, khit, ko too, little caesar, mahawgani, smssms888, yankanar